Sunday May 15, 2022 - 07:30:26
Musharraxa Madaxweyne ee Xisbiga Waddani Cabdiraxmaan Cirro ayaa shaley mar uu ka hadlayey goob ay dhallinyaro badani joogtay sheegay in uu dareenkooda ku shaqayn doono.
wuxuu intaas raaciyey in 2017-kii uu ka soo horjeestay shucuurtii iyo dareenkii markaas ku jirey hadda se uu rabitaankooda ku shaqayn doono.
Hadalkan ayaa werwer ku abuuray xukuumadda maamulka, taas oo dhalisay in maanta ay koox wasiirro ahi qabteen shir jaraa’id. Shirkaas oo uu ka hadley Wasiirka Gudaha Maxamed Kaahin ayaa dhaliilay hadalkii shaley ee Cabdiraxmaan isla markaana ku sheegay mid curfiga siyaasadeed baal marsan.
Amniga guud ee gobollada waqooyi ‘Somaliland’ ayaa aad loogu cabsi qabaa haddii Muuse Biixi uu qaban waayo doorashadii heshiiska ay ku ahaayeen labada dhinac. Dhanka kale maanta waxa hadallo hanjabaad ah jeediyey Faysal Cali Waraabe oo isna kamid ah mucaaridka.
Olole doorashooyin oo xanaf iyo xurguf wata ayaa ka socda Kenya, Soomaaliya iyo maamulka iskii madaxbannaanida ugu dhawaaqay ee Somaliland kuwaas oo keeni kara xasillooni darro baahsan.
Waxaa diyaariyay wadaad Yare Xaashi
Amnesty Internnational oo warbixin kasoo saartay dambiyadii dagaal ee ka dhacay magaalada Kharkiv
Diyaaradaha dagaal Kenya oo duqeymo saf ballaaran ah ka geystay deegaanno katirsan Gedo.